USA: Wiil Minneapolis ku nool oo qosolkiisa caan ku noqday – XOGMAAL.COM
Qof kasta oo dunidan ku nool waxa uu leeyahay hibo alle u dhaliyay, taas oo ay dadka kale u baahanyihiin, waxaana dhacda in uu nolol ama daqli ka sameeyo hibbadaas.
Balse ka waran wiilka yare e malaayiinta qof ay dhoolacadeyntiisa ka heleen, haddana bilaabay in uu lacag ka sameeyo arrintaas?.
Gavin Thomas waa wiil oo qoyskooda kula nool dalka Maraykanka, gaar ahaan Minneapolis, sawiradiisa iyo muuqaladiisa oo internet-ka lagu faafiyay ayaa waxaa arkay dadka Shiinaha, waxaana dhacday in ay durba aad u jeclaadaan.
Lama oga sababta, balse waxa uu hadda noqday xiddig aad u caan baxay illaa shirkadda weyn ee xagga baraha bulshada ee Shiinaha ee Weibo ay ku casuuntay dalka Shiinaha, halkaas oo muuqaaladii laga sameeyay ay daalacdeen malaayiin qof.
Meel kasta oo uu tago, boqolaal qof ayaa safaf usoo gala si ay sawirro ula galaan wiilkan yar.
Wariyaha BBC-da ee laanta Shiinaha Zhaoying Fen ayaa sharaxaysa sababta ay ugu malaynayso in sawirka Gavin ay dadka u jeclaadeen „Dadka shiineeska ah waa kuwa aanan toos u abaarin arrimaha (xir xiran), sidaas darteed badankood waxa ay ku qasbanyihiin in ay jillaan farxad wajigooda ka muuqata , waanan sababta sawirka Gavin ay u isticmaalaan si ay isaga qafiifiyaan caburnaanta haysata”.
Gavin hooyadiis Kate ayaa iyadana ka hadashay caanonimada wiilkeeda waxayna tiri “Dad badan ayaa u arka in wajiga Gavin in uu yahay mid ay aqoonsan karaan, xiriir xagga maskaxdana la samayn karaan”.
Sababta ugu weyn ee dhoolacadeyntiisa loo jecelyahay ayaa ah in ay u maleeyaan in qosolka uu yahay mid jilliin ah oo aanan dhab ka ahayn sida ay sameeyaan inta badan dadka Shiinaha, taas oo ayba qirtay wariyaha BBC-da.
Balse Gavin laftiisa ayaa ka hadlaya „Dadka waxa ay dhoolacadeynteyda u maleeyaan been abuur, ma garanayo sababta, balse waa sida dhabta ah ee aan u qoslo” .
“Waxay I dhahaan, Gavin, waan ku jecelnahay, sawir ma kula gali karna” ayuu intaas ku daray.
Hooyadiis waxa ay sheegtay in marka uu weeynaado uu noqon doono nin sameeya muuqaalada YouTube-ka.
Maraykanka oo albaabada u xiraya xarun 3,000 oo bisadood lagu dilay